Iindaba-Iingcebiso zokunciphisa umbane ongashukumiyo kwiijezi
Xa unxiba kwaye ukhupha ijezi, unxibelelana nabanye, okanye ngempazamo uchukumisa izinto zesinyithi, ihlala ikhutshwa ngesiquphe. Usenokude ubone iintlantsi zombane emoyeni. Ayizukwenzakala kuphela izandla zakho, kodwa kunye nombane ongagungqiyo kunye nokukhutshelwa kuya kuchaphazela umsebenzi wakho kunye nobomi.
Ijezi zithambekele kumbane ongagungqiyo, kuba ulusu lwethu, ezinye iimpahla kunye neejezi ziyadibana kwaye ziyarubuzana, ngakumbi xa unxiba okanye ukhupha iimpahla, umbane we-static ngokuthe ngcembe uqokelela. Xa iqokelela kwinqanaba eliphezulu, iya kukhutshwa yonke ngaxeshanye, kwaye ukubhobhoza kuya kwenzeka.
Susa umbane ongashukumiyo oveliswe kwilekese: Phambi kokuba ubeke kwaye ukhulule ijezi, sebenzisa into yesinyithi ukuchukumisa ijezi. Okanye unxibe i-brooch yesinyithi ukuqhuba umbane ongagungqiyo ophethwe yijezi.
Kuphephe ukunxiba iijezi ezenziwe ngemicu yeekhemikhali, kuba ukungqubana phakathi kwemicu yeekhemikhali kunye nomzimba wakho kunokwenzeka ukuba kuvelise umbane ongashukumiyo. Nxiba izihlangu zesikhumba ngaphezu kwezihlangu zerabha, kuba izinto zerabha zithintela ukuhanjiswa kweentlawulo zombane, ezikhokelela ekufumaneni kweentlawulo zombane.
Ukunciphisa ukuveliswa kombane ongashukumiyo kwiijezi: thenga into yokuthambisa okanye ukutshiza iinwele kwaye ufefe kwijezi ukunqanda umbane ongagungqiyo. Kuba isithambisi sinokwandisa ukufuma kweejezi, kwaye ukutshiza iinwele kunokunciphisa umbane ongashukumiyo. Okanye sebenzisa itawuli efafazwe ngokufanelekileyo ngamanzi kwaye incitshiswe ngamanzi ukusula ijezi. Manzisa ijezi kancinci ukunciphisa ireyithi yokoma kwejezi kunye nokunciphisa ukuveliswa kombane ongashukumiyo.
Ukuphucula indlela yokuhlamba ijezi: yongeza isoda yokubhaka, iviniga emhlophe okanye isithambisi xa uhlamba ijezi. Inokuthambisa iimpahla, inciphise ukoma kwezinto, kwaye incede ukunciphisa umbane ongashukumiyo.
Yandisa ukufuma kwemo engqongileyo: Xa imozulu yomile, umbane oqokelelweyo awudluliseli lula emoyeni. Ungasebenzisa i-humidifier ukwandisa ukufuma emoyeni, okanye ubeke itawuli emanzi okanye iglasi yamanzi kwisifudumezi ukuze ube nefuthe elifanayo.
Thambisa ulusu: Thambisa amafutha kwiindawo zolusu ezinxibelelana neejuzi okanye iinwele ezifakwe lula kunye nemicu yamaphepha ebhityileyo. Ulusu alunakugcinwa kuphela ebusika obomileyo, kodwa nokuba ulusu oluthanjisiweyo luyanxibelelana nezinto zejezi, akukho lula ukuvelisa umbane ongashukumiyo.